China Chechipiri Generation 30-inch charcoal grill Manufacture uye Factory | Chuliuxang
Chechipiri Generation 30-inch charcoal grill
chikafu chine marasha chine CLUX Charcoal Grill. Iyo yakakandwa simbi yekubika grate ine mubato unosimudza inoita kuti marasha ekutanga atakure kuve nyore. Rongedza kupisa uchishandisa dengu rekusimudza marasha kune mahamburger akabikwa zvakakwana kana steaks.
Iyo ichangobva kugadzirwa 30-inch kabhoni grill yakawedzera mabasa matsva maererano nechitarisiko uye basa, uye nzvimbo yekubikisa mambure yakakura sekare.
Dhizaini nyowani yekunze kicheni marasha grill
Kukura Kwechigadzirwa 860*600*480mm
Kubikira nzvimbo 1296*213mm
Style kusvuta barbecue grills
Iyi hombe yemarasha grill inogadzirwa kubva kune yakakwira kupisa inodzivirira Stainless simbi, yakasimba uye yakanakisa abrasive kuramba, isina ngura, isina twist, yakasimba uye inogara kwenguva refu, isingakuvadzi kumuviri wemunhu, inoshandiswa kwemakore mazhinji pasina matambudziko. Yakanakira sekunze inotakurika marasha grill yekumisa musasa, grills yekubikira kunze, gadheni musasa grill inoputa, pikiniki uye tailgating barbeque grill.
INTELLIGENT GRATE-IN-GRATE-SYSTEM - Kutenda kune grate-in-grate sisitimu yegrill trolley, iyo inogona kukwidziridzwa kusvika nekusingaperi, chero chishuwo chegrill chinogona kuzadzikiswa uye, pakati pezvimwe zvinhu, zvinonaka wok, muriwo kana mbatatisi ndiro dzinogona. kuvandudzwa.
ADJUSTABLE COAL LEVEL & EXTRA SHELF - Iyo kureba-inogadziriswa marasha nhanho inovimbisa kutonga kwakaringana kwekushisa kwegrill. Imwe mukana wecharcoal grill ngoro ndiyo yekuwedzera nzvimbo yekuchengetera ine zvikorekedzo padivi kuchengetedza zvakachengeteka chikafu chakagochwa, zvigadzirwa, uye grill midziyo.
SPECIAL VENTILATION - Iyo yakakosha kuvhurika mhepo yekuvhurika kwemarasha grill inovimbisa kutenderera kwemhepo panguva yekubira uye kudzivirira marasha kubuda kana chivharo chavharwa.
NOBLE KUTARISA & AKASIYANA MABASA - Iyo poda-yakavharidzirwa moto mudziyo ine sirivheri Stainless simbi zvibato zvinopa iyo BBQ grill kutaridzika kwakanaka. Chishandiso chekuunganidza madota chine mubato wesimbi isina tsvina uye chinovhura bhodhoro chinopedzisa maficha egrill.
MOBILE - Mavhiri anoita kuti barbecue grill ive nyore kufamba uye kurongeka zvakanaka. Kutenda kumakumbo akasimba, charcoal grill trolley inomira yakachengeteka panzvimbo yayo.
Zvakapfuura: 4+1 Vanopisa simbi isina gasi bbq grill
Zvinotevera: Mugadziri weChina 24inch Heavy Duty Adjustable Cooking Height Charcoal BBQ Grill
griller bbq huni
kusvuta combo grill
21 inch ceramic pizza ovheni
Heavy Duty Meat Drum Gomba Barrel grill
Itsva yekusvika trolley marasha grill